Tambo nyowani dzeNike's Apple Watch dzave kutotengeswa pane yayo webhusaiti | Ndinobva mac
Pasina nguva refu yapfuura takataura nezve kuvapo kwemhando nyowani dzemabhande mune yeApple Tarisa Nike +. Iwo ma micro-perforated fluoroelastomer tambo dzinopa chaizvo, zvine mutsindo kubata kune iyo Nike + vhezheni yeApple Watch.
Idzo nyowani diki-dzakapetwa tambo dzinoenderana nedzimwe nyowani shangu dzeNike kubva kuAir VaporMax Flyknit dzakateedzana, idzo dzevakomana dzaiuya nemhando ina dzakasiyana. Icho chokwadi ndechekuti nhasi zvaive zvichikwanisika kuongorora kuti isu tatova navo anowanikwa paNike webhusaiti, saka kana iwe wanga wakamirira ino nguva, famba famba uchitenderera webhu uye utenge yako.
La Nike Sport tambo Iyo inoratidzira dhizaini yakatarwa ine compression yakaumbwa perforations yekufema uye isina huremu, inoshanduka zvinhu zvinopa zvinoshamisa kusanzwika kunzwa. Iyo yekuvharisa clip kuvhara inovimbisa kukwana kwakakwana kune chero ruoko. Tambo dze42mm dzakakwanira maoko kubva pa140mm kusvika 210mmnepo iyo 38mm inokodzera 130-180mm mawoko.
Kuwedzera aya mavara matsva kune aripo, isu tine izvo kune ese ari makumi mana nemakumi mana nemasere emamiriyoni ekuona tine huwandu hwenomwe huripo mamodheru emhando dzeNike-tambo pamutengo we42 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Tambo nyowani dzeNike's Apple Watch dzave kutotengeswa pawebhusaiti yayo